Dowladda Norway oo Somalia siinaysa lacag dhan $353 milyan oo doollar | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dowladda Norway oo Somalia siinaysa lacag dhan $353 milyan oo doollar
Dowladda Norway oo Somalia siinaysa lacag dhan $353 milyan oo doollar
(Oslo) 10 Okt 2019 – War saxaafadeed rasmi ah ah oo maanta kasoo baxay wasaarada arrimaha dibadda dowlada Norway, ayaa lagu sheegay in Norway ay Soomaaliya siin doonto deyn gaareyso 3,1 bilyan oo lacagta Norwey ah, una dhiganta 353 milyan oo Doolar.
Wasiiradda arrimaha dibadda Norway, Ine Eriksen Søreide oo labo bil kahor booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho, ayaa maanta saxaafada Norway u sheegtay in dhowrkii sano ee ugu danbeeyay ay Soomaaliya ka hirgashay xasilooni amni iyo mid siyaasadeed.
Waxeyna dowlada Soomaaliya ku amaantay fulinta qorshayaasha amni iyo kuwa siyaasadeed ee dib loogu soo nooleynayon nidaamka maaliyadeed ee wadanka, kuwaas oo ay sheegtay inay muhiim u yihiin horumarka guud ee Soomaaliya.
Previous article”Sucuudiyoow bal horta adigu MURAAYAD isku eeg!” – Erdogan oo weerar ku qaaday dalal & ururro cambaareeyay weerarka Turkiga
Next articleShacabka & siyaasiyiinta mucaaradka ah oo si kal & laab ah u taageeray weerarka ay dowladda Turkigu ku qaadday Suuriya